Duqeymaha Mareykanka oo Shacab ku Laayey Afghanistan | Kobciye24.com
Duqeymaha Mareykanka oo Shacab ku Laayey Afghanistan
Sep 4, 2017 - jawaab
Laba duqeyn oo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay toddobaadkan ka fuliyeen dalka Afghanistan ayaa dilay 28 qof oo shacab ah, islamarkaana dhaawacay 16 kale, oo dhammaantood ah haween iyo caruuur, sida ay maanta xaqiijisay QM.
Howlgalka QM ee Afghanistan ee loo soo gaabiyo UNAMA oo baahiyey natiijada baaritaan horudhac ah, ayaa mas’uuliyiinta ugu baaqay inay xaqiijiyaan baaritaan madax banaan oo dhexdhexaad ah oo labada dhacdo lagu sameeyo.
UNAMA ayaa sidoo kale ku baaqay in la qaado tallaabooyinka ku habboon si loo xaqiijiyo isla xisaabtan iyo magdhow la siiyo dhibanayaasha, lagana hortago in dhacdooyinkan ay soo noqdaan.
Weerarka koowaad ayaa Isniintii ka dhacay gobolka Koonfureed ee Herat, halkaasi oo diyaarad aan cidna wadin ay ku beegsatay xubno Taliban ah, hase yeeshee weerarka ayaa waxaa ku dhintay 15 qof oo shacab ah, ayada oo 4 kale ay ku dhaawacmeen kadib markii gantaalo ay ku dhaceen guryo shacab.
Weerarka labaad ayaa ka dhacay degmada Pul-e-Alm ee gobolka bari ee Logar waxaana ku dhintay 13 shacab ah, ayada oo 10 kale ay ku dhaawacmeen. Weerarkaas ayaa lala beegsaday guryo shacab oo la sheegay in Taliban-ka ay gantaalo kasoo tuurayeen.